Nin Shaqaalaha Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL ka tirsanaa oo kooxo hubeysani ku dileen Muqdisho – Madal Furan
Hoy > Warka > Nin Shaqaalaha Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL ka tirsanaa oo kooxo hubeysani ku dileen Muqdisho
Muqdisho adal Furan) – Allaha u naxariistee Maxamuud Cabdi Daahir (Ilkacase) oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Isgaarsiinta Somtel ee magaaladda Muqdisho ayaa Kooxo hubeysani ay saaka magaalada Muqdisho ku dilay.
Marxuumka ayaa la soo werinayaa in kooxo bastoolado ku hubeysani ay ku dileen meel aan ka fogeyn Masaajidka Xareed ee ku dhow Suuqa Bakaaraha, wakhtigaasoo uu u sii jeeday hawlmaalmeedkiisa shaqo.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilkiisa, waxaana qaar ka mid ah Idaacadaha Maxaliga ee magaalada Muqdisho ay qoreen dadkii ka dambeeyay dilkiisa ay ahaayeen koox burcad ahoo doonayay inay ka dhacaan taleefankiisa, inkastoo aan illaa iyo hada la xaqiijin.
Maalmahan waxaa magaaladda Muqdisho ku soo xoogeysanaya dilal kala duwan oo dhowr nuuc isugu jiray, waxaana todobaadkan kaliya lagu dilay magaalada in ka badan 10 ruux oo siyaabo kala duwan ay dilkooda ugu lug lahaayeen ciidan, koox hubeysan iyo falal kale.
Aaska meydkii Madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi oo la dedejiyey
Nin ku taajiray lacag uu hooyadiis ka xaday